तपाईंको आँखाबाट आँशु नै आएन भने के होला ? यसबारे जानाैँ - ज्ञानविज्ञान
मानिसको आँखाबाट आँशु किन आँउछ भनेर सोध्ने हो भने धेरैको उत्तर हुन्छ, ‘दुःख वा पिडाको कारण ।’
हुन त पिडाको कारणले मात्रै पनि मानिसको आँखाबाट आँशु आउँदैन कहिलेकाँही खुसी हुँदा पनि आँशु आँउछ । त्यस्तै प्याँज काट्दा, धुलो धुँवाको प्रदुषण लगाएत आँखामा केही पस्यो भने पनि आँखाबाट आँशु आँउछ ।
खासमा आँखालाई केही कुराले बिझाएपछि आँखाबाट आँशु आँउछ । किनभने आँशुले आँखाको सुरक्षा गर्छ । त्यसैले आँखाबाट आँशु आउनुलाई नराम्रो मानिँदैन ।
तर, जब मानिसको आँखाबाट पर्याप्त आँशु आउँदैन त्यतिखेर भने समस्या निम्तन सक्छ । जब आँखालाई पर्याप्त लुबि्रकेशन मिल्दैन र मानिसको आँखा सुख्खा हुन्छ त्यसले आँखा पोल्ने र दुख्ने महसुस हुन्छ ।
आँखाभित्र वा त्यसको बाहिरी भागमा चिप्रा -म्युकस) बन्छ जसले प्रकाश प्रति आँखालाई धेरै संवेदनशिल बनाइदिन्छ । त्यस्तै आँखा रातो हुन्छ वा तपाइर्ंले धमिलो देख्न थाल्नुहुन्छ ।
आँखा सुख्खा भएमा विभिन्न समस्याहरु निम्तन सक्छ । त्यसैले आज हामी आँखा सुख्खा भएमा के गर्ने भनेर पाँच तरिका बताइरहेका छौं जसले आँखाको समस्यालाई सुल्झाउन मद्धत गर्छ ।
एक सफा कपडा लिनुहोस् र त्यसलाई तातो पानीमा भिजाउनुहोस् । पाँच मिनेटको लागि यो कपडालाई आफ्नो आँखामा राख्नुहोस् पछि हल्का हातले कपडालाई तलमाथि आँखाको गेडीमा रगड्नुहोस् जसले आँखामा लागेको फोहोर वा कचेरा सफा गर्छ ।
पानी तातो हुन्जेलसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस् । यो प्रक्रियाले आँशुको गुणवत्तालाई राम्रो बनाएर आँखा पोल्न र रातो हुन कम गर्छ ।
यो तेलले आँखालाई ओसिलो बनाउने एजेन्टले जसरी काम गर्छ र आँशुहरुलाई छिटै सुक्नबाट बचाउँछ । यस बाहेक यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ जसले आँखामा भइरहेको दुखाईलाई कम गर्न सहायक हुन्छ ।
कपासको डल्लोलाई नरिवल तेलमा डुबाएर यसलाई आँखामा १५ मिनेटसम्म राख्नुहोस् । यो प्रक्रियालाई दिनभरमा कैयौं पटक दोहोर्याउनुहोस् ।
पोषण दिने सप्लिमेन्ट्स
अध्ययन अनुसार ओमेगा ३ फ््याटी एसिडयुक्त खाद्यपदार्थहले मानिसको आँखालाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ । आफ्नो डाइटमा ओमेगा ३ लाई समावेश गर्न तपाईंले साल्मोन माछा, बदाम, ओखर सोयाबिन आदी समावेश गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्ता पोषक तत्वयुक्त खाद्य पदार्थले आँखालाई सुन्निन कम गरेर आँशु बनाउन मद्धत गर्छ जसले तपाईंको आँखा सुख्ख्ाा हुन पाउँदैन ।
आफ्नो अल्कालाइन गुणको कारणले एलोभेरा सुख्खा आँखाको लागि प्रभावकारी उपाय हो । यसको मोइश्चराइजिङ र एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुणले सुन्निएको र रातो भएकोे आँखालाई राम्रो बनाउँछ ।
एलोभेराको पातलाई धोएर त्यसबाट तेल निकाल्नुहोस् । टिस्यु पेपरमा थोरै जेल निकालेर यसलाई आँखाको गेडिमा लगाउनुहोस् । १० मिनेटपछि आँखालाई मनतातो पानीले धुनुहोस् । दिनमा दुईपटक यो प्रक्रियालाई दोहोर्याएमा तपाईंले स्वस्थ आँखा पाउन सक्नुहुन्छ ।
आँखालाई तनावमुक्त राख्न र थाकेको आँखालाई आराम पुर्याउनमा गुलाबजलले मद्धत गर्छ । सुख्खा आँखाको एक मुख्य कारण भिटामिन ‘ए’ को कमी हो । गुलाबजलमा भिटामिन ‘ए’ प्रचुर मात्रामा हुन्छ ।
कपासको डल्लो वा प्याडलाई गुलाबजलमा डुवाउनुहोस् र यसलाई बन्द आँखामा लगाउनुहोस् । त्यसलाई १० मिनेटसम्म आँखामा राखिरहनुहोस् ।
त्यसपछि चिसो पानीले आँखालाई धुनुहोस् । यदि तुरुन्त आराम पाउन चाहनुहुन्छ भने शुद्ध गुलाब जललाई ड्रपको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यो प्रक्रियालाई दिनमा तीनपटक दोहोर्याउनुहोस् ।
हामीले आँखा सम्बन्धि थप केहि जानकारीहरू दिइएका छाै
आजभोली आँखा कमजोर नभएको मानिसहरु हुदैनन् । बच्चाको आँखामा समेत चस्मा लगाएकै हुन्छन् । कम्प्युटरमा लगातार बसी रहदा आँखा कमजोर हुने समस्या हुन्छ ।
निरन्तर मोवाइलमा हेरी रहदा पनि आँखा कमजोर हुन्छ । आँखाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा देख्न नसक्नेलाई थाहा हुन्छ । तै पनि आँखा मानव जिवनको लागि निकै महत्वपुर्ण र नभई नहुने अंग हो ।
आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । आँखा कमजोर हुने कारण खानेकुराले गर्दा पनि हो । त्यसकारण घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस ।
Don't Miss it शरीर कमजोर भएजस्तो हुन्छ ? त्यसो हो भने यस्ता खानेकुरा खानुहोस् र मजबुत शरीर बनाउनुहोस्
Up Next फोक्सो सम्बन्धी बिरामीको लागि तामा अमृतसमान हुन्छ, जान्नुहोस् यसका फाइदाबारे – पढेर शेयर गर्नुहोला